ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပြောပြန်ရင်လည်း မောင်ပေါလွန်ရာကျမယ်…..အပိုင်း(၂)”
Labels: harsh criticism
စင်္ကာပူ မှာကော လူငါးယောက်အထက် စုဝေးခွင့်ရှိပါသလော
ထိုင်း မှာ ဘုရင့် ကာတွန်းရုပ်ပြောင် ကြောင့် Youtube (2) ပိတ်တာ မသိလိုက်ဘူးလား
အိပ်မက် ချစ်သူ said...
ဦးဦးပေါ ပြောသလို ဖြစ်လာမယ့် နေ့ကျရင် သမီးကို “နှိုး” ပါနော် လောလောဆယ် အိပ်ရေးမဝ သေးလို့
ကိုပေါရေ-မအားတဲ့ကြားက ကျွန်မလာဖတ်သွားပါတယ်။ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ အားပေးပါတယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေက လက်ခံသည်ဖြစ်စေ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊ အခုချိန်မှာ အသက် ငါးဆယ်အောက်မှာ ရှိတဲ့ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာသာ မွေးဖွားသူ ဒါမှမဟုတ် ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာ မွေးဖွားပေမယ့် အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ကြီးပြင်းကြသူတွေသာ ဖြစ်လို့ မကောင်းတဲ့ စနစ်ဆိုး ရိုက်သွင်းခံရတဲ့ သူတွေအချင်းချင်း အတူတူပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီကို လိုလားသူတွေလို့ ဆိုတဲ့ ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်မှာလည်း နည်းနည်းဆို တရားလက်လွတ် ဖြေရှင်းချင်တဲ့ အာဏာရှင်တွေ ပေးတဲ့ အမွေကို ရထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ မျက်စိနည်းနည်း ပိုပွင့်တဲ့သူက နည်းနည်းပို သဘောပေါက်မယ် ဒါပဲကွာပါတယ်။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကိုပေါစာကို ဖတ်ပြီး လက်မခံသူတွေမှာလည်း မတူကွဲပြားမှုတွေအတွက် ဒီလို ငါတို့နဲ့ မတူတဲ့ သဘောတရာတွေလည်း ရှိနေပါလား ဆိုတဲ့အသိ၊ တခုခု တိုးသွားမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ကြာလာရင် ဒါတွေကို အကျင့်သားရပြီး လူ့အဖွဲ့စည်းဆိုတာ ကိုယ်တယောက်တည်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အုပ်စုတခုတည်း လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မရဘူး မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားလို့ အများစုနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့လိုတာကို သဘောပေါက်ပြီး Tolerant (ကိုယ်မကြိုက်ပေမယ့် နားလည်ပေးခြင်း) သဘောတရားကို သိလာပါလိမ့်မယ်။
Rita, မငယ်နိုင်.... အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနောနီးမတ် June 14, 2009 2:04 PM
ဒါကြောင့်လဲ စင်္ကာပူ နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုလဲ တ၀က်တပျက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ သတ်မှတ်ထားတာပဲ။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလဲ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြရဆဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ဖို့သင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူတိုင်း လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တယ်။ စီးပွားရေးဆိုတာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ။ ပညာရေးဆိုတာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ။ ကျန်းမာရေးဆိုတာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ၊ အရောင်းအ၀ယ်လဲ နိုင်ငံရေးပဲ။ လမ်းသွားလမ်းလာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ အမြဲကျမတို့ ရှင်သန်နေလျှက် ရှိပါတယ်.......လို့ ပြောထားပါတယ်။
Anonymous:::June 14, 2009 5:56 PM
ဒါဘဲဗျ...အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံ အများစုက ကိုယ်ပိုင်မူနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်နေကြတာယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ရင် ရှေ့ဆက်လို့ရပါပြီ
“စ”လုံးမှာ ပီအေဒီ ကို မလွန်ဆန်နိုင်သလို
“ယ” မှာလဲ ပီအေဒီ (အဝါ) တွေဘဲ တဖက်သတ်အနေအထားနဲ့ ရပ်တည်နေတာ အကျယ်တဝံ့ ရှင်းပြနေဖို့မလို တော့ဘူးထင်ပါတယ်
(တိုက်ဆိုင်စွာ ပါတီနှစ်ခု နာမည်တူနေပါတယ်)
ဆက်သာရေးပါ ကိုပေါ ရေ။ ကိုယ့်အတွေးအမြင်ကို ကိုယ် တတ်နိုင်သမျှ ရေးတာ အရှိကို အရှိအတိုင်း ရေးတာ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းရေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ကိုပေါ အရေထူထူသာ ထားပြီး ရေးပါ။ ကျွှန်တော် ကတော့ စောင့်ဖတ်ရင်းနဲ့ အားပေးပါတယ်။ ကျွှန်တော် က ကိုပေါလို ချက်ကျ လက်ကျ မရေးတတ်လို့ပါ။
တော်တော်များများ ရိုက်သွင်းမခံရ တဲ့သဘောမှာရှိတယ်
ရိုးသာစွာနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဒီဘလော့ကို အမြင်ကတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမြဲလာဖတ်ဖြစ်တယ်
you do haveasurprisingly higher than mediocre analytical thinking. and you can write them down in simplest way of writing ( which is not an easy task) do keep up your good job. i hope those pessimist ဘေးထိုင်ဘုပြော, and those with naive thinking of မဇ္မိုမ ပဋ္ဋိပဒါ means see no evil, hear no evil , will change their mind for the better.
>>>Anonymous (June 14, 2009 7:25 PM )...
အံမယ်လေး...မောင်မင်းကြီးသားရယ်..... စင်္ကာပူက အာဏာရပါတီက ပီအေပီပါ...ကိုယ့်လူရယ်။
ပီအေဒီ မဟုတ်ရပါဘူး။ People's Action Party လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အခွန်အတုပ်တွေ တိုးမြှင့်စည်းကြပ်လွန်လွန်းလို့ သူ့နိုင်ငံသားတွေက Pay and Pay ပါတီလို့ ရယ်စရာ နာမည်ပြောင်နဲ့ ခေါ်ဆိုခံရတဲ့ ပါတီပေါ့။
ထိုင်းက PAD က အရင်က ပါတီမဟုတ်ပါဘူး။ အခုမှ ပါတီထောင်မလို့ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဘန်ကောက်ပို့စ်က သတင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်မှာ လင့်ခ်ပေးထားတယ်။
” ဆရာကျမ္မာရေးဂရုစိုက်ပါ၊ကျမ္မာရေးကော၊လုံခြုံရေးကောပေါ့ ” တဲ့....။ အဲဒီမှာဘာကိုသွားမြင်သလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာလုပ်နေရတဲ့
သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေပါ။ မလုံခြုံဘူးလေ၊ ဆရာဦးဝင်းတင်ဆိုနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မရှိလို့အခုထိဧည့်
YES!!! But we (including me and many others) still have fear. That's too bad. :(
အဘ ဦးဝင်းတင် မှတ်ပုံတင်က သူတို့သိမ်းပလိုက်တာလားဗျ
အခုထိတော့ ဧည့်စာရင်းတိုင်ပြီးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ..။ အာဏာရှင်တွေကတော့ဘာတွေကြံနေမလဲ?
ဘာတွေခေါင်းစဉ်တတ်မလဲ?? အင်း..အာဏာရှင်ကြီးဟစ်တလာ ရှိရင်ငါထက်ဆိုးတဲ့
Congradulation for this post; Sinceafew days i wait your part 2.
If some people who fear this situation .....they better to think about for their future.
Because still now i have no reponse to my son if he ask me one day
" Why don't you try in your best to save Burma??? ".....The one is sure, I will never proud to reply him that, "because i'm so afraid to do"
So lets do all our best to our future generation.
Don't let them in this situation.
Great Man, Try hard , I like what u standing for. :D
ဘယ်လိုမှ နားလည်လို့မရတဲ့ အစိုးရနဲ့ တွေ့နေရတာကိုး ဘဘကြီးတွေက ဝေဖန်တာမကြိုက် လုပ်တော့လည်း စောက်တလွဲ
Based onafew comments reading...
only immature ladies agree your post...
something like..dream writer Lunn Htarr Htarr...
ဒီပို့စ်မှာအခုလက်ရှိ အခြေအနေကို တော်တော် ရှင်း ၇ှင်းလင်းလင်းကို စာဖတ်သူတွေမြင်ရမှာပါ အပိုင်း(1)က နဲနဲ သဘောတရား အားနည်းတဲ့သူတွေနဲနဲရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်သွားတယ်
တစ်ချို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲသဘောတော့ပေါက်နေတယ် ခံစားနေရတယ် အမှန်ကိုသိတယ် ဒါပေမဲ့ မှန်ပါတယ် လို့ဝန်ခံရမှာ ကြောက်နေတာအကျင့်ဖြစ်နေတယ် နိုင်ငံရေးသဘောတရား ဆိုတာကိုလက်ခံရမှာဝန်လေးနေတယ်
အတင်းပဲပုံစံတူသဘောတရားတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီး ပြောပြစ်လိုက်တဲ့စိတ်မျိုး ကအကျင့်ဖြစ်နေကြတယ်
ဒါ ဒီမိုကရေစီနဲ့ကင်းကွာပြီး အကြောက်တရားလွမ်းမိုးတဲ့ နိုင်ငံတွေက စရိုက်တွေပဲ
အောင်ကိုကိုထိုက် က ဇွတ်ကြီးပဲ..... funny guy
 Ko Paw, I like this Part (2) much more than Part (1). You have madeapositive diiscussion and given some positive examples - rather than usingahash criticism. That's really great!
 This is not directly related to this post. I just want to share some of my thoughts. This is related to Ma Nge Naing's comments as well as some of Ko Paw’s previous posts. It is regarding "tolerance". I agree that we should tolerate different life styles and different political views. But, there must be some base lines.
Foralife style, we should tolerate it as long as it does not hurt other people. (Ko Paw has already mentioned it in his comments.) For example, we should not tolerateaperson who turns on his cassette's volume to the highest level at 3:00am.
Regarding the political views, for those who believe in liberal democracy (not the disciplined democracy :-) ...
we should tolerateapolitical view only if it does not violate the principles of democracy, namely PEACE, JUSTICE, EQUALITY, AND RULE OF LAW. But, otherwise, we should reject it. For example, we cannot tolerateapolitical view which promotes racism or religious hatred. We cannot tolerateapolitical view that praises most of Na-Ah-Pha's policies/activities (many of which violates the abovementioned principles of democracy). We cannot tolerateapolitical view that unconditionally endorses the 2008 Constitution, etc. (Here, I am not talking about those who want to accept this constitution as an interim measure and create some political space out of it. I still respect their view even though I do not agree their idea.)
Well said Ko Aung. No further comment at this point on what you said.
However, let me add some more.
The only things that can bring you the goal are endurance, self-constraint and wisdom.
No doubt Ko Paw has enough endurance against fierce attack. ( I won't label those even as criticisms)
ကွန်မန့်ထဲမှာ မငယ်နိုင် ဒီလိုလေး ရေးထားတာ သဘောကျတယ်။
"လူ့အဖွဲ့စည်းဆိုတာ ကိုယ်တယောက်တည်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အုပ်စုတခုတည်း လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မရဘူး။ မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားလို့ အများစုနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့လိုတာကို သဘောပေါက်ပြီး ကိုယ်မကြိုက်ပေမယ့် နားလည်ပေးခြင်း သဘောတရား"
ဒီသဘောတရားကို ကိုပေါရေးခဲ့ဖူးတဲ့ “သရုပ်ပျက်လို့ ပြောသင့်ရဲ့လား” မှာ Culture, Civilization, MultiCulture တို့သဘော ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတာလေးတွေ ကွန်မန့် ၂ ကြိမ်ရေးပြီး တို့ထိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကိုအောင်ရေးထားတဲ့ ဒါလေးကိုလည်း သဘောကျတယ်ဗျာ။
We should tolerateapolitical view only if it does not violate the principles of democracy, namely PEACE, JUSTICE, EQUALITY, AND RULE OF LAW. But, otherwise, we should reject it.
ဒီပို့စ်မှာ ကိုပေါရေးထားသမျှ အားလုံးကို အကြွင်းမဲ့ လက်ခံပါတယ်။ ရေးထားတာလည်း ကောင်းပါတယ်။
ခေါင်းစဉ် နဲ့ အံဝင်တယ်လို့ မထင်ပါ။
ဒီအကြောင်းတွေပြောတာ ကိုပေါလွန်ရာ မကျပါခင်ဗျာ။
နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ..ပေါ ပါ့ဗျာ ..
To Anonymous (June 15, 2009 10:30 AM)
Anonymous (June 15, 2009 10:30 AM)ရေ..
ဘယ်လိုမမှန်ပြန်တာလဲ? လင်းပါအုန်း..ချက်နဲ့ လက်နဲ့ပေါ့
အဲလို ဒီမိုကရေစီမရှိ..အာဏာရှင်ဆန်တဲ့နိုင်ငံမှာ အခုထိနေနိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ..ခင်ဗျားတို့လို ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေထက်စာရင်...
ရဲရင့်တဲ့သူတွေလို့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရင် လွန်မလား...
"" ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေထက်စာရင်...
ရဲရင့်တဲ့သူတွေလို့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရင် လွန်မလား..."
နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ အမြဲကျမတို့ ရှင်သန်နေလျှက် ရှိပါတယ်.......လို့ ပြောထားပါတယ် in our very safe place at blog..
To Anonymous (June 15, 2009 11:07 AM)
လက်ရှိနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလေးစားပါတယ်၊ ကိန်းအောင်းနေတဲ့အကြာက်တရားကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ရင်တော့စနစ်ဆိုးကြီးမကြာခင်ချုပ်ငြိမ်းမှာပါ၊ ပြည်ပကလူတွေကလည်းပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ပံ့နေပါတယ်။
ပာား ပာား very very funny view!!!
ဝေဖန်ရေးမပာုတ်ဘူး လေကန်ရေး ဖြစ်နေတယ်
လေနဲ့ ကန်ပြီးရေးထား သလိုပဲ... :P
ဒီလူတွေဟာ... အခြေခံ လူတန်းစားတွေကို အနုနည်းသုံးပြီး စော်ကားနေတာပဲ... ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ဘဝတွေကိုနားမလည်ရင် သိပ်မပြောတာကောင်းမယ်နော.....
''''''နဲနဲ သဘောတရား အားနည်းတဲ့သူတွေနဲနဲရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်သွားတယ်
အတင်းပဲပုံစံတူသဘောတရားတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီး ပြောပြစ်လိုက်တဲ့စိတ်မျိုး ကအကျင့်ဖြစ်နေကြတယ်""""
ခင်ဗျားသောက်ရူးတယောက်ပဲ.... အောင်ကိုကိုထိုက်...... ထင်တလုံးနဲ့ နိုင်ငံရေး အဘိဓမ္မာ ဆရာကြီးကျနေတာပဲ....
ခင်ဗျား ကီဘုတ်တလုံး အသုံးချပြီး လိုရင် လိုသလို မလိုရင်မလိုသလိုပြောတာလောက်တော့ ဘယ်သူ့မေးမေး လုပ်တတ်ပါတယ်ဗျာ....
သောက်မြင်ကပ်ရင်ဆဲ... အခြေအနေမဟန်ရင် လူရိုသေရှင်ရိုသေပေါ်လစီ တွေရေး..... ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို တလုံးမကျန် ဖတ်နေတဲ့ လူတွေကတော့ ခင်ဗျားသောက်ပေါဆိုတာ သိနေတဲ့ အတွက် ရီချင်တာပေါ့ဗျာ...
ခင်ဗျား လောက်တော့ လဒတိုင်း လှပါ့ဗျာ...
ခင်ဗျား ဘာတွေ ဆက်လုပ်မလဲ .. နောက်လိုက်တွေက ခင်ဗျား ဘလော့ ကိုအသုံးချပြီး ဘယ်လောက် ဝင်အာနိုင်မလဲ လာလာကြည့်ရတာ အရသာပဲဗျို့...
ရွံစရာကောင်းတာ မှန်သမျှ အရသာရှိနေပုံရတယ်။ ;D
Nothing to Do life in Singapore lah...
Get Happy Hour..?
အခြေအနေမဟန်ရင် လူရိုသေရှင်ရိုသေပေါ်လစီ တွေရေး.....
ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို တလုံးမကျန် ဖတ်နေတဲ့ လူတွေကတော့
ခင်ဗျားသောက်ပေါဆိုတာ သိနေတဲ့ အတွက် ...
နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ အမြဲကျမတို့ ရှင်သန်နေလျှက် ရှိပါတယ်.......လို့ေ
ဖတ်တဲ့သူတွေက လက်ခံသည်ဖြစ်စေ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊
အမြဲစာဖတ်သူအနေနဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ကွန်မင့်တွေကိုတွေ့ နေရပေမယ့်လည်းကိုပေါရဲ့ တိုင်ပြည် အပေါ်ထားတဲ့စေတနာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအသိအမြင်တွေတိုးပွားလို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ၊ နေ့ တိုင်းလာဖတ်နေပါတယ်။
"“ပြောပြန်ရင်လည်း မောင်ပေါလွန်ရာကျမယ်…..အပိုင်း(၂)”" ကမောင်ပေါမလွန်ပါ ကောင်းတဲ့ပိုစ့်ပါ
“ပြောပြန်ရင်လည်း မောင်ပေါလွန်ရာကျမယ်…..ဆိုတဲ့ အတိုင်း မောင်ပေါလွန်ရာကျအောင် အပိုင်း (၃) ရေးပေးပါ
I really don't wanna deal with this kind of wasted-wrongly blogger and his followers in my real life...
luckily, they are only stay at blog...
now at least i know that they are exist in real world..
((((( ဟမ် )))))
အပိုင်း(၂) ဆိုလို့ (၁) နဲ့ဘာမှလဲမဆိုင်ဘူး
အောင်မြင်တဲ့ Exile Politician ဆိုတာ မတွေ့ဘူးသလောက်ဘဲ (ဒီဖက်ပိုင်းမှာ) အဲဒါ သဘောပေါက်
“နေပါဦး အိပ်မက်ကောင်းနေတုန်း” ဆိုရင်လည်း သဘောရှိ
မလွန်ပါဘူး လို့ဘဲဖြေပါရစေ.(ကျတော် ကိုယ်တိုင်လည်း အပြင်မှာပါ)
ထပ်ဖြည့်စွတ်ရရင် ထောင်အကျခံပီးတိုက်ပွဲ ဝင်သူတွေကိုကော (လုံးဝမမေ့သင့်)
ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာ အသက်တွေသာ ကျနော်တို့ ကြီးကြီးလာကြတာ
ခေါင်းမာလွန်း တဲ့ နှစ်ဖက် အခြေအနေတွေကိုလည်း အားမရဘူး
အမေစု မရှိရင် ဘာမှဖော်ဆောင်မှု မပေးနိုင်တဲ့ NLD ကိုလည်း အားမရဘူး
ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်လို့ ဒီလိုလျှောက်ပြောနေမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း အားမရ ပါဘူးး ဗျာ
အပြောမတတ်လို့ ဆဲသလိုဖြစ်သွားရင်တော့ ဝိုင်းသာ ဆဲကြပါဗျာ
J.ညီညီ က တစ်မှောင့်
ငါဆဲလိုက် @#$%!&*%$# ကဲ မှတ်ပလား
ကျနုပ်တို့ သည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ “ဘဝပေး အခြေအနေကြောင့် ရောက်လာကြပါသည်”
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်မချစ်သူမရှိပါ ပြည်တွင်းမှ လုပ်ကိုင်နေသူ များအားလေးစားပါသည်
ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကိုပေါရေ… ၁ ထက် ၂ ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်… အထူးသဖြင့် ၂ ရဲ့တင်ပြဆွေးနွေးသွားပုံလေးကို နှစ်သက်မိပါတယ်… လက်မခံနိုင်စရာမရှိလောက်အောင် ထောင့်စိလှပါတယ်…
Keep writing this blog.We are 100% behind you.
ထွေးနဲ့ ကိုပေါရေ.. အင်းစိန်ပြန်ခဲ့နော်... အင်းစိန်က စော့င်နေမယ်....
ငြင်းကြမယ်... ခုန်ကြမယ်။ သေသေချာချာဖတ်တယ် ကွန်မန့်တွေကို။ ကောင်းလိုက်တာနော် ကိုပေါကို ဖားတဲ့လူက ဖား ချတဲ့လူက ချ ဆော်တဲ့လူက ဆော်။ အပိုင်း ၂ တွေ ၃ တွေ ၄ တွေ လုပ်မနေပါနဲ့လေ။ လိုရင်းတိုရှင်းပေါ့။ စကားမစပ် နာမည်က copyright နဲ့ ညိနေတယ်နော်။ ကိုပေါစာတွေ မဖတ်ချင်လို့ကို မဖတ်ဘူး။ ခင်ဗျားကို ချီးပဲထင်တယ်။
ပျင်းတယ်ဗျာ ဒီနေ့ ကွန်မန့်လည်း သိပ်မတက်ဘူးနော်
PAP တို့ PAD တို့ PPP တို့ (ဟိုက်.ဆော်တီး ပါကစ္စတန် အထိရောက် တွားပီ ) ခဏထားအုံး
ရန်ကုန် မြို့တော်ကြီးမှာတောင် ည(၁၁)နာရီ ဆိုင်တွေ ပိတ်ခိုင်းတာ ညင်သာသော “မာရှယ်လော” ဗျ ၊ ဒီကြားထဲ ရပ်ကွက်ထဲမလဲ “ဟို ကိုကို နဲ့ ရဲ ကိုကို” တို့က ကျီးကန်းတောင်းလှန် နဲ့ လှုပ်တာနဲ့ “လာလိုက်ခဲ့”ဆိုတာ ချည်းဘဲ
အောင်ကိုကိုထိုက်(ခေါ်) မျိုးမြင့်မောင်.... သင့်အား အမိမြန်မာပြည်မှ အလိုရှိသည်... အမြန်ပြန်လာရန်..
But if you were in overseas, you can do your job without sucking anyone's d..k or swallowing balls.
Sick of hearing those repeatedly as Daw Aung San Su Kyi also advised us to study and work harder for the country and not only begging from foreigners like dogs dreaming of feasting elephant's dick asanice meal.
ဂဏန်းလို လူမျိုးများလဲ ရှိပါသေးတယ်....
သူတို့ ကတော့ ရှေ့ ကလဲ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အ၇ည်အချင်း
မရှိဘူး..ဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လဲ နောက်လိုက်
မလုပ်နိုင်ဘူး...ဘေးတိုက်(ဂလန့် ဘဲ )သွားတတ်တယ်.
ပြီးတော့ သူ့ ကို လဲ သွားမထိနဲ့ .. လက်မအကြီးကြီးနဲ့ 
ဂဏန်းက ဂဏန်းနေ၇ာမှာ မနေဘဲ နဲ့ကိုပေါ ၇ဲ့ ဘ
လောက်မှာ ဘာလို့ လာမန့် နေကြလဲ မသိဘူး....
ဂဏန်းများလဲ နအဖနဲ့ အတူ တစ်ပါတည်းအမြန်ဆုံး
If there are Burmese who will work asakyant phont suckers for 1500 kyats day rate, Burmese deserve such shitty government.
Asadog loves shit, people got the government they deserve. Shitty Burmese deserve shit government led by fatty Than Shwe and old suckers.
To Anonymous, June 16, 2009 5:24 AM
Why so rude? Insulting Burmese?
You are not Burmese at all? Unbelievable, unbelievable.
ကောင်းပါလေ့ဗျာ.. တကယ့်ကုို လှပတဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခုပါပဲ.. ခေါင်းစဉ်တပ်တာတော့ ရှေ့ကခေါင်းစဉ်ကြီး ဆက်မယူပဲ တစ်ခုခု ဖြစ်သင့်တယ်ထင်သား.. ဘာမှ အကြောင်းအရာ အရ ဆက်စပ်မှုမရှိသလုို အနှစ်သာရလဲ ကွဲတယ်ထင်တယ်ဗျ..
ကွန်မင့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေကွန်မင့်ဖတ်ရတာ ငယ်ငယ်က စစ်ပညာသင်ခဲ့ရတာတောင် သတိရမိတယ်ဗျာ။
ကျနော်တို့ အတန်းထဲက ကျောင်းသားတယောက်ဟာ…. သတိ ကို သူ့နားထဲမှာ တချိန်လုံး တလွဲကြားနေခဲ့ပုံရပါတယ်။ သူ့အလှည့်ရောက်လို့ ရှေ့ထွက်အော်ရတဲ့အချိန်မှာ “၀လိ” လို့ အော်တယ်ဗျ။ အဲသည်မှာ ကျနော်တို့အားလုံး သတိဆွဲ ရပ်နေရင်းက မအောင့်နိုင်ဘဲ တဟိဟိ ရယ်မိကြလို့ တတန်းလုံး ဆရာရိုက်တာ ခံရဘူးတယ်ဗျိုး။
Anonymous (June16, 2009 2:57AM)….
တော်ပါပေ့ ကိုယ်လူရယ်…. တလွဲကောက်ချက်ဆွဲတဲ့နေရာမှာ။ စုံထောက်ကြီး ဦးနံပြားအရှုံးပေးရမယ်။
မျိုးမြင့်မောင်က စင်္ကာပူမှာ SMU တက်နေသူ။ အောင်ကိုကိုထိုက်က (ကျနော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်) “စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်း။ အခု နယ်စပ်မှာ ထင်တယ်။”
တော်ပါပေ့ ငပေါရယ်.. မင်းလဲ မှန်းတာပါပဲကွာ....
မျိုးမြင့်မောင်က SMU က ဆိုတော့ ရောင်းရင်းကြီးတွေပေါ့ကွာ.... ဟတ်ဟတ်
http://mamaonlinediary.blogspot.com/ က ကွန်မန့်တွေမှာလည်း ပြသနာတွေ တက်ကုန်ကြပြီတဲ့ ။
ကိုပေါရဲ့ ပို့စ်အဟောင်းတွေ ဖတ်ရင်း ကွန်မန့်တစ်ခုတွေ့လို့ပါ ကျွန်တော့်ဘ၀က အခုတော့ သောင်ပြင်လွှတ်ခံရတဲ့ ရွှေဟင်္သာဘ၀ ပါ ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ တချို့ကတော့ ဂဏန်းလို့ ခေါ်ကြမယ်ပေါ့လေ အဲဒီကွန်မန့်က ကွန်မန့်အမျိုးအစားတွေခွဲထားတာတွေ့လို့ပါ ကျွန်တော်တို့လို ပလိန်းနှိပ်တဲ့ လူမျိုးကို ရုရှ ဒါမှမဟုတ် ကြီးကြီးမာစတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်သူလို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်ပေါ့နော် ဒါပေမယ့်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်က ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ အဲဒါလေး လာရှင်းပြတာပါခင်ဗျာ ဒီပို့စ်နဲ့တော့ မဆက်စပ်ဘူးပေ့ါလေ ဒါပေမယ့်လည်း လာရှင်းပြတာပါခင်ဗျာ
ကိုပေါကို လမ်းသစ်နဲ့ ကြောင်ချီးက ချီးကျူးလာပြီဆိုတော့ နှယ်နှယ်ရရတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ.... ဟတ်ဟတ်
Anonymous (June 16, 2009 2:21 PM )...
If you want someone to answer your question, you need to address him properly. :-)
နိုနဲ့ သားသား.... ဟဲ့... ကောင်လေး ပြောင်းခေါ်ပေးလိုက်စမ်း....
တားကပဲ သူများကို အဲလို နမ်နှိမ်ဘူးတာ သားကို ထိရင် သားက ခံဘူး... သားခံဘူး...
u didn't say my english was poor so u can't answer as usual...
Dear Paw :D,
pls answer my questions.. De de.. ok?
Mg paw is so so free to answer whatever comments..?
So better go back home myanmar and Do something in Action lah..
Why wasted life in singapore and Talk only..?
I think the Anonymous June 16, 2009 2:21 PM
is mixing up the privacy matter and the essence of democracy and media freedom.
ဘယ်မီဒီယာကမှ မေးခွန်းမထုတ်ဘူးဆိုရင် မိတ်ဆွေ ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။ နတ်မျက်စေ့ ပုလင်းကွဲနဲ့ လှမ်းကြည့်တာလား။
ဒီဥပဒေ စတင်ပြဌာန်းကတည်းက အဲဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသည်းအသန် အချေအတင် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်လာတာ ဒီနေ့အထိပဲ။ ပင်တဂွန်ရဲ့သဘောက စစ်ဖက်မိသားစုတွေအနေနဲ့ သူတို့မိသားစုဝင်တွေ ကျဆုံးတဲ့အခါ ဒီကိစ္စကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆန်တဲ့ သီးသန့်ကိစ္စအနေနဲ့ပဲ ဆောင်ရွက်ချင်တယ်။ မီဒီယာကို ပေးမသိချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တဖက်မှာလည်း စစ်အတွင်း ထိခိုက်နစ်နာမှုကို ပြည်သူတွေသိသင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ ဘက်ရှိတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတဟာ သူကိုယ်တိုင်တော့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ပါတီဟာ ကွန်ဂရက်စ်မှာ အများစုဖြစ်နေရင် သူ့ပါတီက အမတ်တယောက်ကနေ တင်သွင်းပြီးတော့ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုချက်ရတဲ့အခါ ဥပဒေကို အတည်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သမ္မတဟာ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်ကို ကျော်လုပ်တာဆိုရင် သူတို့ဆီမှာ ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးလို့ရတယ်။ ရေဂင်လက်ထက်က ကွန်ထရာအရေးကိစ္စကို ပြန်လည် စုံစမ်းရေးလုပ်သလိုပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဦးသန်းရွှေထင်တိုင်းကျဲနေတာတွေကို ဘယ်သူမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ စစ်ဆေးလို့ မရဘူး။
ယူအက်စ်မီဒီယာဟာ လုံးဝဥဿုံမဘုတ်ဆုံ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင် လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာတော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာမီဒီယာကဲ့သို့ ဘာမဆို သတင်းအမှောင်ချ၊ သတင်းအမှားတွေကိုသာ တချိန်လုံး ထုတ်ပြန်တတ်တဲ့ မီဒီယာမျိုး မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ အီရတ်မှာ အမေရိကန်စစ်သားတွေ အကျဉ်းစခန်းမှာ အကျဉ်းသားတွေကို နှိပ်ကွပ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဘယ်ကထွက်သလဲ။ ယူအက်စ်မီဒီယာကပဲ ဖော်ပြတာပဲမဟုတ်လား။ ဂွာတာနာမိုအကျဉ်းစခန်းတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်း ယူအက်စ်မီဒီယာက ဖော်ပြတယ်မို့လား။ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ နှိပ်စက်ခံရတာကို မြန်မာ့အလင်းတို့၊ ကြေးမုံတို့၊ လျှပ်တပြက်တို့ ဖော်ပြကြလို့လား။
ဘယ်မီဒီယာတွေဟာ ဘယ်လောက်လွတ်လပ်ခွင့် အဆင့်အတန်းရှိတယ်ဆိုတာ လွတ်လပ်သောနယ်ခြားမဲ့သတင်းထောက်များအဖွဲ့ (အာရ်အက်ဖ်အက်စ်) စတဲ့ တသီးတခြား လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အမှတ်ပေးခွဲခြားထားပုံကို အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲသည်ကိစ္စအသေးစိတ်တော့ ကျနော်မသိလို့ မပြောပြနိုင်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောနိုင်တာက ဘုရ်ှမှာ သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အာဏာတွေ အပ်နှင်းထားတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသည်အပ်နှင်းထားတဲ့ အာဏာတွေကို ဆီးနိတ်နဲ့ ကွန်ဂရက်စ်ကနေ တချိန်လုံး စောင့်ကြည့်ပြီး အားမျှအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ…. သမ္မတဟာ လက်နက်ကိုင် တပ်ပေါင်းစုအကြီးအကဲဖြစ်နေပေမယ့် စစ်တပ်အတွက် အသုံးစရိတ်နဲ့ Regulatin ကို ကွန်ဂရက်က ပြန်ကိုင်ထားတယ်။ သမ္မတအနေနဲ့ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့။
သမ္မတ တယောက်ဟာ အဲသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းကလုပ်နေသရွေ့ သူ့အဆုံးအဖြတ်ဟာ မှားချင်မှားမယ်၊ မှန်ရင်မှန်မယ်။ အဲသည်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သူ့အပေါ်မှာ လူကြိုက်များခြင်း၊ နည်းခြင်းရှိမယ်။
သေချာတာကတော့ သမ္မတတယောက်ကို လူကြိုက်မများရင် သက်တမ်းတဆက် (၄ နှစ်)ပဲ ခံမယ်။ ဘယ်လောက်လူကြိုက်များများ ၈ နှစ်ထက် ပိုမခံဘူး။ နအဖ အစိုးရလို ဘယ်သူမှ မရွေးချယ်မတင်မြှောက်ဘဲ အနှစ် ၂၀ ကြာ နေချင်လို့မရဘူး။ နအဖကို အခုလူမကြိုက်တာတောင် ဖြုတ်ချရ အင်မတန်ခက်ခဲတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း သူ့အာဏာကို မကန့်သတ်နိုင်ကြဘူး။
အဲသည်တော့ ဘုရ်ှဟာ အာဏာရှင်ဟုတ်မဟုတ် မိတ်ဆွေဘာသာ ချင့်ချိန်ကြည့်ပေါ့။
အောင်ကိုကိုထိုက် သည် ပြည်တွင်းမှာရှိနေပါသည်
88။ 91။96။98။2007 အရေးအခင်းအားလုံးမှာ နောက်မတွန့်ပဲပါခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ကကိုပေါရဲ့ ပို့စ်ကို commentရေးတာပါ သူတစ်ပါးကိုလှောင်ပြောင် ထိခိုက်ခြင်း မရှိပါ ကိုယ့်ရာဇဝင်ကိုယ်ရေး အေးအေးနေကြပါ anonymous တွေ
ခင်ဗျားတို့တွေကြည့်ပြီး 88က လူတွေသွားသတိရတယ်
သူများလုပ်တော့လှောင်တယ် ဖျက်တယ် စစ်တပ်လဲဆုတ်သွားရော ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ လူလည်ဝင်လုပ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးလိုလို ဘာလိုလို ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဗိုလ်ကျတယ် ထောက်လှမ်းရေးကလာပြီး မင်းတို့ဒီမိုကရေစီရပြီ လာလာ အောင်ပွဲခံပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လဲဆိုရောရှေ့ဆုံးက
Ko Kyaw Htin,
Thanks for sharing your knowledge and the right way of thinking in your comments. It is absolutely valuable. Some may not get it or accept it but the reader like me really appreciate your comments and your time too.
Ofcourse...You are " JD "...?
>>>Blogger Ko Paw said...<<<
ဘယ်သူလဲမှတ်တယ်။ မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး ဖြစ်နေတာကိုးဗျ။
လို့သာရယ် လိုက်ချင်ပါတော့တယ် (Comment Investigator) ကြီးရယ်.
P2P များသုံးနေ လားထင်ရတယ်..ဟ.ဟာ့
ခလေးတွေ သွားပြော၊ နာမည်နဲ့ လိုက်ပါပေ့